एकै गाउँका आठ महिलामा क्यान्सरको लक्षण !::Nepali News Portal from Nepal
बागलुङ, ११ फागुन – बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–७ जैदीका महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका लक्षणहरु देखा परेका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पाठेघरको मुखकको क्यान्स (भीआईए) परीक्षण शिविरमा सहभागि महिला मध्ये केहीमा क्यान्सका लक्षणहरु देखा परेका हुन् । १ सय २१ जना महिलामा गरिएको परीक्षणमा ८ जनामा क्यान्सरका लक्षणहरु देखा परेको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका स्रोत व्यक्ति लक्ष्मी शर्माले बताइन ।
त्यस्तै परीक्षणमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मीको समुहले ९ जनालाई संकास्पद सूचीमा राखेको छ । परीक्षणको लागि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका डा. सौगात कोईरालाको नेतृत्वमा चिकित्सकहरुको समुह जैदी पुगेको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा रहेका चिकित्सकहरुले उनिहरुलाई सघाएका थिए ।
चिकित्सकहरुले क्यान्सका लक्षण देखिएका र संकास्पद दुवै बिरामीहरुलाई तत्काल स्वास्थ्योपचारको सल्लाह दिएको शर्माले बताइन । ग्रामिण क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने गरेका कारण क्यान्सर जस्तो रोगको शिकार हुने गरेको डाक्टर कोईरालाले बताए। स्वास्थ्य संस्थाको कम पहुँच र लाजका कारणले पनि महिलाहरुले पाठेघरको मुखको जाँच गर्दैनन् । जैमिनी नगरपालिकाले परिक्षणको रुपमा जैदीमा शिविर सञ्चालन गरेर उनिहरुलाई खुल्ने वातावरण सिर्जना गरेको जनाएको छ ।